Liverpool oo xiiseyneysa saxiixa laacibka Monaco ee Kylian Mbappe | Maalmahanews
June 26, 2017 - Written by admin
( Maalimahanews) 26 June 2017: Liverpool ayaa xiiseyneysa inay la soo wareegto Kylian Mballe laakiin kama dhaadhacsana inuu ciyaaryahanka doonayo inuu u wareego England, sida ay shaacisay hilinka Sky Sports.
Kooxda Reds ayaa qiimeyneysa xaalada waxaana ay diiwaangeliyeen xiisahooda ciyaaryahanka.
Real Madrid ayaa hogaamineysa tartanka loogu jiro saxiixa Mbappe taasoo noqon doonta mid jabisa rikoorka suuqa kala iibsiga dunida.
Kooxa kale oo ay ku jiraan Arsenal iyo Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale xiiseynaya. Monaco waxa ay dooneysaa inay ceshato laakiin waxaa jira warar ay qorayaan warbaahinta Faransiiska oo sheegaya inuu diiday mushahar kordhin boqolkiiba 900 oo loo sameeyay.
Monaco ayaa diyaar u ah inay sarre u qaado mushaharkiisa haatan uu qaato ee 16 kun ginni isbuucii oo ay ka dhigto 140 kun ginni isbuucii.
18 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa dhaliyay 26 gool waxaana uu sameeyay sideed caawin xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyadoo Monaco loo caleemo saaray hanashada horyaalka Faransiiska waxaana ay soo gaareen semi-finalka Champions League.
Mbappe ayaa noqday ciyaaryahankii labaad ee ugu da’da yaraa ee u ciyaara xulka France ka dib Maryan Wisnieski markii uu kulankiisii ugu horeysay ka horyimid xulka Luxembourg bishii Maarso isagoo 18 sanno, seddex bilood iyo shan maalmood jira.